यौन सम्पर्कअघि भुलेर पनि नगरौं यी ५ काम - Gokarna News from Nepal
बुधबार, चैत २६, २०७६
यौन मानिसको एउटा अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई पूरा गर्दा वा यसलाई व्यवस्थापन गर्दा हामीले निकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो सावधानी अपनाउँदा ठूलो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । सामान्य लाग्ने लापरवाहीले पनि हाम्रो शरीरमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्दछ । त्यसकारण यौन सम्पर्क गर्नुपूर्व यी काम भुलेर पनि गर्नुहुँदैन ।
यस्तो छ ४ लाखको सिक्री लगाउने लखपति कुकुर, कारण झनै रोचक
लिंग बढाउने उपाय, लिंग कत्रो हुनुपर्छ ? प्रेमिकालाई कसरी खुसी राख्ने ?
५०० मै आफ्नी छोरीलाई परपुरुषसँग यौनसम्पर्क लगाएपछि…
विद्यालय हिडेकी छात्राको राजधानीमा १० घण्टाको सेक्स भिडियो बन्यो !